Shiinaha ECO MATT PP -180 warshad iyo soosaarayaasha | Shawei
Qodobka Shayga: DP-P009
Magaca: Eco Matt PP -180
Khad: Eco Sol UV latex
Sharaxaadda badeecada: Xaashida dusha sare ee matagga Eco-Solvent inkjet, Qaab dhismeedka dusha sare ee Silky ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo astaamaha dabiiciga ah ee warqadda farshaxanka cad oo siman iyada oo la ilaalinayo bilicsanaanta dabiiciga ah ee lagama maarmaanka ah ee ay dalbadeen farshaxanyahannadu. U isticmaal waraaqaha joornaalka 'Eco-Solvent matte inkjet' daabacadahaaga si aad u hesho natiijooyin cad, fiiqan iyo sawirro midab leh. Waa xulashada ugu fiican ee xirfad-yaqaanada heer sare ah, sawir-soo-bandhig tayo leh markasta. Waraaqda pp daabacaadda ee Inkjet ayaa ah banner-keena filimkeena ugu sarreeya. Waa iska caabin ilmada ka sarreysa iyo daboolka daloolada yaryar ayaa siinaya awood u leh inuu soo saaro sawirro tayo leh oo sawir leh kana dhigo tan tan warbaahinta ku habboon calaamadaha gudaha. Ku isticmaal dareeraha eco, dareeraha iyo midabka UV. Uma baahna dahaadh la'aan haddii aan loo baahnayn wax soo saar sare.
Miisaanka: 120g / sqm
Waxyaabaha Saldhigga: 100% polypropylene
Dahaarka Dusha sare: Caddaan Madow & Matt
Khadka habboon: Eco dareeraha, dareeraha, khad UV
Warqadda aasaasiga ah: 3 inji
Cabbirka badeecada: 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 * 30M
soo bandhiga nidaamyada muujinta
Shawei Digital wuxuu ku yaalaa gobolka Zhejiang, waxaa la aasaasay 1998, qalab xayeysiis xirfad leh soo saar iyo codsi. Shirkadda Shawei Digital waxay leedahay 11 laamood oo ku yaal Shiinaha oo dhan, ganacsigu wuxuu daboolayaa wax soo saarka, iibka, dhoofinta iyo daabacaadda.
Dhammaan tayada wax soo saarka waxaa si dhab ah u xakameynaya nidaamkayaga QC, dhammaan walxaha waxaa lagu soo saaray dukaan shaqo oo aan lahayn boodh waxaanan leenahay R&D u gaar ah si aan u hubino dhammaan horumarka. Waqtigaan, QC socodka ayaa isticmaali doona qalab casri ah si loo hubiyo inline ka alaabta ceeriin illaa dhamaadka alaabta.
Xubnaha qoyskeena Shawei waxay ula dhaqmaan faahfaahin kasta si dhab ah. Waxaan halkaan kuwada noolahay oo aan isla kobcineynaa shirkadda ou. Shawei, MOYU, Gomay magacyada qaar sumcad wanaagsan ayey ku helaan suuqeena waxaanan ku siiney xalal isku aaddan shirkadaha caanka ah sida Walmart, DHL, Pepsi iyo wixii la mid ah.
Si aan u siino adeeg kafiican suuqkeena, markasta waxaan kaqayb galnaa carwada aduunka oo dhan, waxaan soo aruurineynaa jawaab celinta macaamiisheena oo aan u horumarinaa waxyaabo cusub oo loogu talagalay iyaga. Sababtoo ah keenida alaabada “KU HANO, COLORFUL & FLEXIBLE”, waxaan ka helnaa jawaab celin wanaagsan suuqa. .
Hore: ECO MATT PP -210
Xiga: ECO MATT PP -180 CUDURKA SARE
ECO MATT PP -180 CUDURKA SARE
FARSAMADA DIB UGU SOO CELI DIIWAANKA
CAYAARAHA CAGTA PET BANDARKA EE DOORASHADA UP-ECO
FABRCI EE ISKUULKA
SAWIRKA NOLOSHA SARE EE ECO (2)